(Daawo) MW Farmaajo "Kenya waa cadow mana ka yeeleyno faragelinta ay ku hayaan Jubbaland" - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Daawo) MW Farmaajo “Kenya waa cadow mana ka yeeleyno faragelinta ay ku...
(Daawo) MW Farmaajo “Kenya waa cadow mana ka yeeleyno faragelinta ay ku hayaan Jubbaland”
MW Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wareysi siiyay Telefishinka Universal TV aya ka jawaabay su’aalo badan oo laga weydiiyay marxaladaha siyaasadeed iyo amni ee dalka.
Mar uu ka jawaabayay su’aal la xiriirta Qaraxyada iyo sababta keentay in ay kordhaan ayaa waxaa uu MW Farmaajo ku jawaabay “Dowladihii naga horreeyay waxay wakhti ku dhumiyeen Madaxweyne iyo Ra’isul Wasaare dagaala sanad walba, hadda iyagoo taa ka faa’iideysanaya kooxda Shabab waxay ku guuleeysteen in ay horumariyaan oo casiriyeeyaan qaraxyada kana dhigaan kuwa waa weyn” Jawaabta Farmaajo aya fila waa ku noqotay daawadayaasha.
Farmaajo aya intaa ku daray “Aniga iyo RW Kheyre waxaan ku guuleysanay in aan wada joogno seddex sano, waxaana dalka u bilownay xasilooni siyaasadeed” Mar la weydiiyay maxay ku dhacday in idinka oo sugi la’a amniga Muqdisho iyo wadada Afgooye iyo Balcad in aad ciidan u dirtaan Gedo ayuu ku jawaabay “Ciidankaas waxa ay sugayaan xuduudaha waana shaqo ay leedahay dowladda dhexe, waayo ciidamada Kenya ayaa nagu hayo xadgudub waxayna rabaan in aay siyaasadeeyaan kiiska Badda ee naga dhexeeyo iyagoo isticmaalaaya maamulka wakhtigiisa dhamaaday ee Axmed Madoobe”.
Wuxuu intaa ku daray in Kenya ay qatar ku tahay amniga iyo xasiloonida Soomaaliya waxayna faragelin toos ah ku haysaa gobolada Jubbooyinka waxaanan uga digeynaa in aay joojiso faragelinta ay nagu hayso.
Madaxweyne Farmaajo ayaa keenay gobolka Gedo ciidamo Itoobiyaan ah oo si xoog ah u qabta gobolka Gedo iyo Gobolada Jubbaland si talada looga tuuro Madaxweynaha Jubbaland. (Halkan ka daawo)
Iyadoo aan intaa lagu soo koobi karin wareysiga oo aad u dheeraa ayaa waxaan halkan hoose idiinkugu soo gudbineynaa wareysigii oo dhameys tiran.
Previous articleMaraykanka oo si rasmi ah u aqoonsatay maamulka Axmad Madoobe
Next articleDowlada Farmaajo oo noqotay “tii ugu xumeyd” ee warbaahinta xorta ah